के यौन लत वास्तवमै रोग हो ? यसको उपचार सम्भव छ ? यौन लत अब रोगको सूचीमा | Rajmarga
के यौन लत वास्तवमै रोग हो ? यसको उपचार सम्भव छ ? यौन लत अब रोगको सूचीमा
अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेनको एउटा कथन प्रचलित छ । उनले भनेका थिए–चुरोट छोड्न सहज थियो, मैलो सयपटक यस्तो गरेँ। यद्यपि निकै सम्भव छ कि उनले यस्तो नभनेका हुन् । पछि उनको मृत्यु फोक्सोको क्यान्सरका कारण भएको थियो ।
एउटा समाजका रुपमा हामीले निकोटिन, मदिरा र ड्रग्सजस्ता नशालु कुरालाई लतका रुपमा स्वीकार गरेका छौ । हामीले यसबाट हुन सक्ने हानीलाई पनि स्वीकार गरेका छौ ।
तर, यदि कुरा सेक्स लतको हो भने विशेषज्ञहरुको राय बाँझिएको छ। केहीका अनुसार सेक्सको लत हुन्छ र केहीले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
सेक्सको लत अहिलेलाई रोग होइन, त्यसैले अहिले कतिले यस विषयमा किचित्सकय परामर्श माग गरे। त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क पनि उपलव्ध छैन।
पोर्न र सेक्सको लतको समस्या झेलिरहेकाहरुको सहयोगका लागि विकसित गरिएको एउटा वेभसाइटले बेलायतमा २१,००० जनामा सर्भे गरेको थियो। उनीहरुले वर्षमा२०१३ पछि वेभसाइटसँग सहयोगका लागि सम्पर्क गरेका थिए ।
यसमा ९१ प्रतिशत पुरुष थिए । र, मात्र १० जनाले आफ्नो समस्याका लागि डाक्टरको परामर्श लिएका थिए ।
सेक्सको लतलाई सन् २०१३ मा ‘डायग्नोस्टिक एन्ड स्टेटिस्टिकल मैनुअल अफ मेन्टल डिसअर्डर्स’ (डीएसएम)मा समावेश गर्ने विषयमा विचार विमर्श भएको थियो । तर प्रमाणहरुको अभावमा यसलाई समावेश गरिएन ।डीएसएम अमेरिका र बेलायतमा एउटा महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टुल हो ।
तर, अब कम्पल्सिभ सेक्शुअल बिहेवियर (बाध्यकारी यौन व्यवहार) लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको तर्फबाट जारी हुने ‘मैनुअल इन्टरनेशनल क्लासिफिकेशन अफ डिजिज’ (आइसीडी) मा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
नयाँ प्रमाण थाहा भएपछि जुवा खेल्ने लत र बढी खाने लतलाई पनि २०१३ मा रोगका रुपमा स्वीकार गरिएको थियो । पहिला जुवालाई बाध्यकारी व्यवहारै मानिएको थियो । थेरापिस्टहरुका अनुसार सेक्सको लत पनि यसैमा समावेश हुन सक्दछ ।
एउटा शोधबाट स्पष्ट भएको छ कि सेक्सको लतका शिकार कुनै पनि व्यक्ति जब पोर्न हेर्दछ, तब उसको दिमागमा यस्तै गतिविधिहरु हुन्छ जस्तो कुनै नशाको लतको शिकार व्यक्तिको दिमागमा ड्रग्स देखेपछि हुन्छ ।
कुनै व्यक्तिलाई सेक्सको लत छ वा छैन–यो करामा निर्भर गर्दछ कि तपाई कुन कुरालाई लत मान्नु हुन्छ । यसको कुनै निर्धारित आधिकारिक व्याख्या छैन ।
ओपन युनिभर्सिटीमा एमेरिटस प्रोफेसर डाक्टर फ्रेडरिक टोएटस भन्छन्–यदि यो कुनै यस्तो चिज हो, जसमा कुनै शारीरिक रुपमा निर्भर गर्दछ र जुन छोड्दा शारीरिक चोट पुग्नेछ त्यसो हो भने सेक्स लत हुन सक्दैन ।
यद्यपि उनका अनुसार विस्तृत व्याख्या अधिक सहयोगी सिद्ध हुनेछ । डाक्टर टोएटस भन्छन् कि कुनै पनि लतको दुई वटा पहिचान हुन्छ–आनन्द वा रिवार्डको चाहना र यो व्यवहारको इर्दगिर्द संघर्ष हुनु । विशेषज्ञका अनुसार प्रतिफलको चाहना नै लतलाई बाध्यकारी व्यवहारबाट अलग गर्दछ । यद्यपि दुवैमा धेरै हदसम्म समानताहरु हुन्छन् ।
प्रोफेसर टोएटस भन्छन्–लतको शिकार मानिसहरु अल्पकालिक फाइदा हेर्दछन् भलै दीर्घकालमा उनीहरुले हानी बेहोर्नु बढी छ। यसविपरीत बाध्यकारी व्यवहार (आब्जेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर) बाट प्रभावित मानिसहरु यस्तो व्यवहार पनि गर्दछन्, जसबाट उनीहरुलाई कुनै मजा प्राप्त हुँदैन ।
तर आनन्दको चाहना त हामी सबैमा हुन्छ त्यसो भए सामान्य प्रतिफलको चाहनावाला व्यवहार र लतमा के अन्तर हुन्छ त ?
मनोवैज्ञानिक डाक्टर हैरियट गैराँर्ड मान्छिन् कि कुनै व्यवहार त्यतिबेला लत बन्दछ जब त्यो यति तिब्र हुन्छ कि यसबाट व्यक्ति र उसको वरपर उपस्थित मानिसलाई हानी पुग्न थालोस् ।
उनी भन्छिन् कि जुवा खेल्नु वा अधिक खाने लतलाई रोग मानिएको छ, तर सेक्सको लतलाई छैन किनभने त्यो जनमानसमा लामो समयदेखि छ।
यसको अर्थ यो भयो कि जुवा वा अधिक खाने विषयमा बढी मानिस सहयोग लिनका लागि अगाडि आए, जसबाट त्यसलाई रोग भएको मान्नेहरुको अधिक समर्थनमा प्रमाण प्राप्त भयो ।
डाक्टर अबिगेल सान क्लिनिकल साइकोलजिस्ट हुन्, उनी मान्छिन कि सेक्ससम्बन्धी व्यवहार पनि लत हुन सक्दछ । तर जुन मानिस यो भावनाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहने समस्या झेलिरहेका छन् उनीहरुका लागि सेक्स कुनै अरु समस्याका कारण पनि हुन सक्दछ, जस्तै डिप्रेशन, चिन्ता वा आघातबाट बाहिर निस्कन सेक्सको सहारा लिनु ।
उनी भन्छिन्–फरक फरक गतिविधिहरु र मादक पदार्थसँग सम्बन्धित गतिविधिहरुले अलगअलग तरिकाबाट प्रतिफल दिन्छ। तर कुरा यो हो कि त्यसले प्रतिफल दिन्छ । यस्तो मान्नुको कुनै कारण छैन कि सेक्सले पनि यसप्रकारको काम गर्दछ । तर कुरा यो हो कि यसका विषयमा अहिले हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छैन ।
यद्यपि उनी यो कुराबाट सन्तुष्ट छैनन् कि सेक्सलाई लत मान्दा मानिसहरुलाई सहयोग पुग्नेछ । विशेषगरी उनीहरुको जो सेक्सको प्रयोग अन्य समस्याहरुको सामना गर्नका लागि गरिरहेका छन् । उनलाई लाग्दछ कि यसबाट ओभर डायग्नोसिसको समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ अर्थात गलत औषधिहरु दिइयो वा लक्षणलाई ठिकसँग एनालाइज न गरिएको होस् ।
के यौन लत एउटा मिथक मात्र हो ?
कतिपय मानिस यसलाई स्वीकार गर्दैनन् कि सेक्सको लत एउटा वास्वविक रोग हो । ‘द मिथ अफ सेक्स एडिक्शन’ पुस्तक लेख्ने यौन थेरापिस्ट डेभिड ले भन्छन्–आमरुपमा सेक्सको लत मान्ने व्यवहार वास्तवमा मुड र कुन्ठासँग सम्बन्धित समस्याहरुको उपचार नगराउनुको लक्षण हो ।
उनी भन्छन–सेक्स वा हस्तमैथुनलाई मदिरा वा ड्रग्स बराबर मान्नु सही होइन । मदिराको लतका शिकार मानिस यो छोड्दा मर्न पनि सक्छन् ।
उनी भन्छन्–सेक्सको लतको धारणा स्वस्थ यौन सम्बन्ध के हो योसँग सम्बन्धित नैतिक मूल्यहरुमा आधारित छ ।
‘यदि तपाई आफ्नो थेरापिस्टको बुझाई वा धारणाबाट बढी वा गलत तरिकाले सेक्स गरिरहनु भएको छ भने तपाई उनीहरुको नजरमा सेक्सको लतको शिकार हुन सक्नु हुन्छ ।’
इन्टरनेशनल क्लासिफिकेशन अफ डिजिजको आगामी अंकमा कम्पल्सिभ सेक्शुअल बिहेवियरलाई समावेश गर्ने विषयमा शोधपत्र प्रस्तुतकर्ताहरुको एउटा समूहले तर्क दिएको छ कि यो जालबाट बचिरहनु पर्छ ।
उनीहरुका अनुसार–सेक्समा अधिक रुची वा व्यवहार’ को ‘यौन इच्छाहरुका बारेमा नैतिक निर्णयहरु वा सेक्सको इच्छालाई अस्वीकार गरिएका’ आधारमा उपचार गरिनु हुँदैन ।
यद्यपि जुन मानिसहरु यो स्थितिलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् उनीहरुका अनुसार यसबाट त्यस्ता मानिस सहयोगका लागि अगाडि आउन सक्ने छन् जो यो समस्याको सामना गरिरहेका छन् । भेलै सेक्स लत तपाईमा एउटा समस्या होस् वा फेरि अन्य कुनै गहिरो समस्याको लक्षण होस् ।रचेल श्रायर, बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: अब यस्तो पो आयो महिलाको स्तन छोप्ने नयाँ ट्रेन्ड
Next post: छोरा नपाएको भन्दै पत्नीलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट